“Hadda kaddib waxaad iigu yeertaan Mohamed.”. Mo Farah – Gool FM
“Hadda kaddib waxaad iigu yeertaan Mohamed.”. Mo Farah
(England) 15 Agoosto 2017. Wiilka Soomaaliyeed ee u orda dalka waynaha Britain ee Mo Farah ayaa doonaya in wixii markaan ka dambeeya loogu yeero magaciisa oo dhammeystiran Mohamed Farah maadaama uu ordadiisa u weeciyay dhanka midka dheer ee Marathon-ka.
“Magaceyga Orodada dheer waa Mohamed,” Mo Farah ayaa sidaa yiri.
“Waxaan dareemayaa inay iminka soo dhammaatay howsha Mo. Waxaan doonayaa inaan iska ilaawo guulihii aan gaaray iyo wixii aan soo sameeyay.”.
34-jirka ayaa hadalkaan ka dhaawaajiyay tartankii ugu dambeeyay ee world championships oo uu bilada dahabka ka qaatay orodka 10,000 metres halka midka 5,000 metres uu galay labaad sidaana ku helay Bilada qalinka.
Wiilka u dhashay Soomaaliya ayaa ku guuleystay afar jeer Olympicada adduunka iyo waliba lix koob oo caalami ah.
Mohamed Farah ayaa dhanka kale aad u dhaleeceeyay saxaafada oo ku sheegay inay isku dayayaan inay bur buriyaan taariikhdii uu lugihiisa ku qoray:
“Waad qori kartaan waxaad jeceshihiin, xaqiiqda ayaa waxay tahay inaan guulahaan gaaray ku gaaray dhabar adeeg iyo howl kar, anigoo xaniyaheyga dhigayay diilinta sanadba sanadka xiga isla markaana guul u keenayay dalkeyga.
“Waan ku guuleystay wixii aan ku soo guuleystay, waxaad isku dayaysaan inaad bur burisaan.”.
Liverpool oo u weecatay Jean Seri si ay ugu buuxiso booska Coutinho
Zidane oo ka xanaaqay ganaaxii lagu riday Cristiano Ronaldo (Muxuu ka yiri?)